Fivoriam-be Antananarivo ny sabata 16 jona 2012 - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
Fivoriam-be Antananarivo ny sabata 16 jona 2012
18 juin 2012 admin
Fotoan-dehibe ho an’ny Fiangonana Apokalypsy eo anivon’ny rezionaly Antananarivo no notontosaina tetsy Ambohimarina Itaosy ny sabata 16 jona 2012 lasa teo. Lanonana telo sosona no nanamarika izay fotoan-dehibe izay, ka nitarika ny fotoana tamin’izany ny ray aman-dreny pasitera Mailhol.
Ho famaranana amin’ny fomba ofisialy ny fampianarana Apokalypsy izay natao tao amin’ny radio fanambarana fm 98.4 mhz, dia nisy ny fiaraha-mivavaka lehibe izay notanterahina tetsy Ambohimarina Itaosy. Ny sabata 16 jona 2012 lasa teo no nanatontosana izay fotoam-bavaka izay. Ankoatry ny famaranana ny fampianarana tamin’ny fomba ofisialy anefa dia nampiavaka io fotoana io ny fiarahan’ny fiangonana nanamarika ny faha 52 taonan’ny ray aman-dreny pasitera Mailhol. Tamin’ny fotoana tapany maraina àry dia nisy ny lanonana tsotsotra ho fiarahabana azy noho izay fahatratrarany ny faha 52 taonany izany. Taorian’izay kosa dia niroso tamin’ny fizarana ny tenin’Andriamanitra ny pasitera Mailhol. Araky ny perikopa an’ny fiangonana dia nalaina tao amin’ny Matio 10: 28-33 sy Romana 11: 1-6 izany. Nambaran’ny mpanompon’Andriamanitra tamin’izay toriteny izay fa mafy ny rivotra mifofofo, mitady ny fomba rehetra tsy hahatanteraka izay nambaran’i Jehovah. Manoloana izany anefa dia nampahery ireo mpino maro be tonga teny an-toerana ny ray aman-dreny. Nohamafisiny kosa anefa fa tokony hiorina tsara ao amin’ny Tompo na dia eo aza ireo fanenjehana.
Natomboka tamin’ny fanolorana ireo “pre-misionnaire” 12 mirahalahy, miatrika ny fiofanana ho misionera kosa ny fotoana tapany hariva. Marihina fa eo amin’ny vondrom-bavaka Karmela Itaosy no miofana izy 12 mirahalahy, ary mpampianatra mihisa 10 no miandraikitra ny fampiofanana azy ireo, izay tarihin’i pasitera Mailhol. Taorian’ny fanolorana azy ireo, sy ny fitondrana am-bavaka azy dia niroso tamin’ny firaisana latabatra tamin’ny Tompo ny rehetra. Ny pasitera Mailhol hatrany no nitarika ny fotoana rehetra. Aorian’Antananarivo dia hivoaka amin’ny faritany ny famaranana ny fampianarana Apokalypsy, satria tsy teto Antananarivo ihany no nanaovana izany. Ny fandaharam-potoana manaraka àry dia any amin’ny faritra avaratr’i Madagasikara ka hisantatra izany i Mahajanga, ny 14 jolay 2012 ho avy izao. Hisy araka izany ny diabe iarahan’ny fiangonana, hanatrika izay fotoana izay.
Publié dans Ireo Vaovao, Vaovao Samihafa
Conférence de presse 13 jona 2012
Radio Fanambarana fm 98.4 Mhz